Wholesale 8-ply Professional Heavy Battle Tady sy Fanenomana Tady ho an'ny Fanatanjahan-tena Fanamboarana sy Orinasa |XGEAR
Fanatanjahantena & Fitness
8-ply Professional Heavy Battle Tady sy Fanenomana Tady ho an'ny Fanatanjahan-tena
XGEAR Heavy Battle Ropes dia namboarina avy amin'ny 100% poly Dacron miaraka amin'ny teknolojia randrana manokana ho an'ny faharetana tsara kokoa, ity tady fanofanana fanazaran-tena manohitra ny fitafy ity miaraka amin'ny tady vatofantsika sy kitapo fanantonana rindrina, dia natao ho an'ny fiofanana matanjaka amin'ny vatana, fomba tsara handoro tavy, manatsara ny fiaretana ary manatanjaka ny vatana ambony.Ny savaivony dia 1.5 ″, misy 30/40/50ft total 3 habe azo isafidianana.
loko:MAVO & MAINTY / MENA & MAINTY
●Fitaovana:Ny tadin-jiro avo lenta dia vita amin'ny 100% Poly Dacron izay mavesatra sy mateza kokoa noho ny fitaovana hafa.
●Teknolojia fandrandrana manokana:tsy hivaha toy ny tady hafa ny tady fanazaran-tena / Tady Undulation matevina matevina 8.
●Lisitry ny Accessories:2 Pcs Oxford Waterproof Sleeve (manarona ny tady fanofanana fanatanjahan-tena mba hihazonana ny fikorontanana sy ny korontana eo amin'ny helo-drano).
●Bonus maimaim-poana:2pcs tanany miaro + 2 Vatofantsika tady + Stainless vy carabiner + rindrina rindrina.
●Fikarakarana hafanana:Ny tahony mifono lava kokoa amin'ny farany dia afaka manome ny fitanana mafy sy miaro ny tananao tsy ho kivy.
● Ny tady Heavy Battle Tady mora mihodinkodina ary mora entina mivoaka.Afaka manao fanatanjahan-tena ianao na ao an-trano, na ao amin'ny gym na any ivelany satria ny kitapo vatofantsika dia miantoka ny tady na aiza na aiza tianao.
Kendrena mpampiasa Advanced
ara-nofo 100% Poly Dacron miaraka amin'ny tanany tsy tantera-drano Oxford
Fampiofanana tanjaka Tsara
Savaivony tady Haavo: 1.5"
Halavany: 30/40/50ft, ny lava kokoa, ny mahery kokoa.
Color Mavo & mainty / Mena & mainty
Asa tanana Fanenomana tady
Lanja entana 9.45KG
Haben'ny baoritra L27.56" x W9.84" x H5.91"
CartonGross Weight 9.55KG
MENA & MAINTY
MAVO & MAINTY
Ahoana ny fampiasana Wall Mount:
DINGANA 1:Mampiasà bitika 12 MM hanaovana lavaka;
DINGANA 2:Apetraho ao anaty lavaka ny bolt fanitarana;
DINGANA 3:Atsofohy amin'ny rindrina ny fametahana rindrina.
Ento mankany amin'ny ambaratonga manaraka ny fanazaran-tenanao:Battle Rope no fitaovana tsara indrindra tsy ho an'ny vatana ambony ihany fa koa hanamafisana ny hozatra sy ny fiaretana aerobic.
Mahatsapa ny fihenjanana fototra mandritra ny fotoam-panatanjahantena, ampitomboy ny tanjaky ny abs, ny sandry, ny soroka, ny lamosina, ny tongotra ary ny glutes amin'ny alàlan'ny fampidirana hetsika, toy ny fitsambikinana, lunges ary squats mba hahatanteraka ny tanjonao ara-batana amin'ny fomba mahomby amin'ny tady miady tsy manam-paharoa XGEAR.
Misy fanazaran-tena mahafinaritra maro:Mamindra ny tady amin'ny lafiny iray, amin'ny faribolana, slam, sintony miaraka amin'ny kodiarana ampiana amin'ny farany, sns. Aorian'ny fanazaran-tena mafonja, ny savily dia ho mora kokoa sy milamina kokoa, ny hozatrao koa dia hahomby kokoa.
teo aloha: Karazana an-dranomasina 600D 3 Bow Bimini Top Cover amin'ny habe samihafa ho an'ny sambo
Manaraka: 600D Saron'ny sambo tsy tantera-drano miendrika sambo V-Hull Tri-Hull fanjonoana Ski Pro-Style Bass Boats